रोनाल्डोको चुनौती : मेस्सीले भन्दा धेरै बालोन डी’ओर जित्ने !! - Experience Best News from Nepal
रोनाल्डोको चुनौती : मेस्सीले भन्दा धेरै बालोन डी’ओर जित्ने !!
युभेन्ट्स स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले हालै एक चुनौती पेश गरेका छन्, उनले आफ्नो प्रतिद्वन्दी लिओनेल मेस्सीले भन्दा धेरै पटक बालोन डी’ओर जित्न चाहना रहेको बताएका छन । ३४ बर्षे रोनाल्डोले र ३२ बर्षे बार्सिलोना स्टार लिओनेल मेस्सीले समान ५ -५ पटक बालोन डी’ओर जित्न सफल भएका छन ।
उक्त विषय रोनाल्डोले पायार्स मोर्गनको अन्तर्वार्तामा बताएको आजको बि बि सीमा छापिएको छ । रोनाल्डोले भनेका छन् आफु मेस्सी भन्दा धेरै पटक बालोन डी’ओर जित्न चाहेको र छ, सात या आठ भन्दा धेरै पटक बालोन डी’ओर जित्नु पर्ने दाबी समेत गरेका छन् ।
रोनाल्डो भन्छन बालोन डी’ओर प्रति मेरो प्रेम छ र म उक्त पुरस्कारको लायक समेत छु !!
रोनाल्डोले मड्रिडका निम्ति ९ बर्षमा १५ ट्रफी जिताएका थिए भने ५ पटक मड्रिडका निम्ति च्याम्पियन लिग जिताएका थिए, र भन्छन हरेक खेलमा मेरो सम्झना एक विशिष्ट खेलाडीको रुपमा रहेको छ ।
म फुटबलको इतिहासमा छु जसले एउटा इतिहास रच्दै छ र फुटबल इतिहासमा म एक सबल खेलाडी हु रोनाल्डोले थपे । साथै उनले भनेका थिए उनि एक विश्व उत्कृस्ट हुन् र फ्यान जो रोनाल्डो;लाई पहिलो मान्दैनन भने आफु उनीहरुका निम्ति दोश्रो रहेको संज्ञा दिन्छन ।
इतिहासको एक विशिष्ट खेलाडी आफु रहेको उक्त अन्तर्वार्तामा रोनाल्डोले दावी गरेका थिए ।
–वि वि सीको एक लेख अनुवादित !!